Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyada Armenia iyo Azerbaijan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Ruushka ayaa dib u bilaabay duulimaadyada Armenia iyo Azerbaijan
Airlines • Airport • Wararka Armenia • Aviation • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Duulimaadyada labada dalba waxay hadda sameyn karaan laba duulimaad usbuucii min Moscow ilaa Baku iyo afar jeer usbuucii min Moscow ilaa Yerevan
Duulimaadyada ka imanaya Moscow ilaa Yerevan waxay dib u bilaabanayaan Febraayo 15
Duulimaadyada ka yimaada Moscow ilaa Baku waxay dib u bilaaban doonaan Febraayo 17
Bishii Maarso 2020, Ruushka ayaa hakiyay dhammaan duulimaadyada rakaabka ganacsiga ee dibadda u aaday cudurka faafa ee coronavirus
Saraakiisha duulimaadyada rayidka ee Ruushka ayaa ku dhawaaqay in Xiriirka Ruushka uu dib u bilaabayo duulimaadyadii ganacsiga ee qorshaysanaa ee Armenia iyo Azerbaijan, oo horay loo joojiyay sababo la xiriira faafa coronavirus, laga bilaabo maanta.
Duulimaadyada labada dalba waxay hadda sameyn karaan laba duulimaad usbuucii min Moscow ilaa Baku iyo afar jeer usbuucii min Moscow ilaa Yerevan. Ruushka Aeroflot waxay ku dhawaaqday qorshaheeda ah inay afar duulimaad toddobaadkii u sameyso Yerevan laga bilaabo Febraayo 15, iyo laba duulimaad usbuucii Baku, laga bilaabo Febraayo 17.
Xilligan, dalxiisayaasha waxaa loo oggol yahay inay galaan Armenia, laakiin waxaa looga baahan yahay inay yeeshaan baaritaanka PCR aan ka badnayn 72 saacadood ka hor imaanshahooda.
Gelitaanka Azerbaijan, si kastaba ha noqotee, hadda waa loo xiray dalxiisayaasha. Kaliya diblomaasiyiinta, ajaaniibta ehelkooda leh dhalashada Azerbaijan, ajaanibta shaqada ama sharciga degenaanshaha leh iyo ardayda ayaa loo ogol yahay inay soo galaan, laakiin waa inay lahaadaan baaritaanka PCR aan ka badnayn 48 saacadood kahor bixitaanka.
Bishii Maarso 2020, Ruushka ayaa hakiyay dhammaan duulimaadyadii rakaabka ganacsiga ee dibadda u joogay cudurka faafa ee coronavirus. Bishii Sebtember, Ruushku wuxuu joojiyay inuu qaado duullimaadyadayada dib u celinta. Xilligan, shirkadaha diyaaradaha ayaa loo oggol yahay inay qaadaan duulimaadyada xamuulka iyo rakaabka; si kastaba ha noqotee, sharciyada gelitaanka rakaabka way ku kala duwan yihiin waddamada.
Hawada sare ee Guam waxay ku ifin doontaa rashka & diyaaradaha qumaatiga u kaca ...
Goobta Dhacdada Cusub ee NYC ee leh Hogaamiyaha Iibka Cusub
Talaalka iyo Talaalka Guam ee dalxiisayaasha reer Taiwan